ZOTRA NASIONALY : Lasibatry ny mpanendaka ireo fiara tonga vao maraim-be ao Toamasina
“Mangarom-bilany”, araka ny fomba fiteny ny fihetsika asehon’ireo mpanendaka eny amin’ny toby fiantsonam-piarakodia zotra nasionaly. 21 avril 2017
Hatramin’ny faran’ny herinandro teo, nanova paikady indray ny mpanendaka fa tonga maraim-be amin’ny ora fahatongavan’ireo fiara, ka eny indray ry zareo no manjono.
Noho ny tahotra amin’ny tsy fandriampahalemana tokoa mantsy dia miandry miposaka masoandro vao mampidina mpandeha ny mpamily, izany hoe matory ao anaty fiara ny mpandeha.
Maharaka izany fomba fiasa izany ireto mpanendaka ireto ka andrasan’izy ireo efa tafapetraka tsara ny fiara, ary miandry mangina tanteraka ny ao anaty fiara no tonga moramora izy ireo. Rehefa rendremana torimaso iny ny ao anaty fiara dia sokafan’izy ireo moramora ny fitaratra misy ny mpandeha amin’ny sisiny, ka eo izy ireo no maka izay zavatra mora raisina.
Lasibatra amin’izany ny paoketra, misy entana an-tanana : very amin’izany ny finday sy ny vola mbamina amin’ny kara-panondrom-pirenena.
Maro no mpandeha efa lasibatra, koa miantso fandraisana andraikitra avy amin’ireo koperativa ny mpandeha mba hametraka mpiambina manokana hanara-maso ny manodidina mandritra ny fiantsonan’ny taksiborosy tonga vao maraimbe.
“Tsy vahaolana ny fidinana an-dalambe” FIKASANA HANONGAM-PANJAKANA, FANAKORONTANA … (323) 14 janvier 2021 Tantsambo nitsabo tena nasaina nandohalika avy eo notifirina FAHADISOANA TOMBANTOMBANA (150) 13 janvier 2021 Lahiantitra 60 taona nanolan-jaza 5 taona VOHIDROTRA TOAMASINA II (112) 14 janvier 2021 Nilaza ho tsy tompon’antoka koa ny Fadintseranana FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (92) 13 janvier 2021 Milaza hanova paikady amin’ny fanakorontanana ny firenena RODOBEN’NY MPANOHITRA (61) 14 janvier 2021 Nahazo ny anjarany mpanodina voankazo sy mpanarato FILOHA ANDRY RAJOELINA (57) 12 janvier 2021